PC Solid/Line mpempe akwụkwọ extrusion Line - China PC Solid/corrugated mpempe akwụkwọ extrusion Line Supplier, Factory –Jwell
Mpempe akwụkwọ PC siri ike dabara: Ogige, ebe ntụrụndụ, ịchọ mma na paịlị paseeji; Ihe ịchọ mma n'ime na nke dị na ụlọ azụmahịa, mgbidi ákwà ngebichi nke ụlọ mepere emepe nke oge a; akpa ikuku, ihu ihu n'ihu ọgba tum tum, ụgbọ elu, ụgbọ oloko, ụgbọ mmiri, ụgbọ okpuru mmiri, ọta ndị agha na ndị uwe ojii, ụlọ ntu ekwentị, akara mgbasa ozi, mgbasa ozi nke ụlọ oriọna, okporo ụzọ awara awara na ụzọ obodo. ihuenyo nchedo nkebi.
Mpempe akwụkwọ corrugated PC: bọọdụ corrugated PC nwere uru nke ihu igwe na -eguzogide ihu ọma,mmetụta na-eguzogide,nnyefe ọkụ dị elu.Ọ na -ejikarị ya eme ihe n'elu ụlọ maka ụlọ nkwakọba ihe na ihe owuwu dị mfe, dị ka ọdọ mmiri na -eme mkpọtụ, ebe egwuregwu ski, ebe ezumike ọdụ ụgbọ mmiri na ihe ndị ọzọ.
Ọdịdị nke ngwaahịa
Nkọwapụta nke Extruder
550Kg / awa
450Kg / awa
Ngwa nke ịghasa na gbọmgbọm maka ịkpụzi ọgwụ
PU/TPU Mmegharị Mmegharị Usoro
Usoro Ihe Ntughari Ọpụrụiche
HDPE eyi Polymer oké osisi paving slab extrusion akara